Live Broadcast Solution ပြုလုပ်ရန် Internal Network တစ်ခုပြုလုပ်ရန် IPTV Encoder ကိုအသုံးပြုခြင်း။ - CZH / Fmuser Fm Transmitter China Supplier ဆက်သွယ်ရန်: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
နေအိမ် » သတင်း » Live Broadcast Solution တစ်ခုပြုလုပ်ရန်ပြည်တွင်းကွန်ယက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် IPTV Encoder အသုံးပြုနည်း။
ရက်စွဲ: 2017-07-07 / အမျိုးအစား: သတင်း
1. ပိတ်ထားသောနေရာများ, အစည်းအဝေးခန်းများ, အင်တာနက်ပတ်ဝန်းကျင်မရှိပါ
2. ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များသည်အကြောင်းအရာလုံခြုံမှု၊ လျှို့ဝှက်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်။ လျှို့ဝှက်ချက်မရှိသည်။ အတွင်းပိုင်း ၀ န်ထမ်းများကိုကြည့်ချင်သည်
ဝန်ထမ်းများ 3.Internal လေ့ကျင့်ရေး
Intranet ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်သည် Live Content စုဆောင်းခြင်း၊ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်တိုက်ရိုက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုအားကြည့်ရှုရန် LAN တွင် streaming media server တစ်ခုတည်ဆောက်ရန်ဖြစ်သည်။
၁။ တိုက်ရိုက်စီးကြောင်း protocol သည် rtmp နှင့် hls တို့ကိုထောက်ပံ့သည်
၂။ Streaming သည် push နှင့် pull mode နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့သည်
၃။ အသံနှင့်ဗွီဒီယို encoding အထောက်အပံ့ H3 / AAC
၄။ အွန်လိုင်း transcode လုပ်ရန် FFmpeg ကိုသုံးပါ
၅။ Memory ခွဲဝေမှုကိုအနည်းဆုံးသိမ်းဆည်းရန်အဆင့်မြင့် buffering နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုမြန်ဆန်သော streaming နှင့် memory footprint ကိုလျော့နည်းစေသည်
«နောက်သို့ Live Streaming အတွက် 2017 ခုနှစ်လူကြိုက်အများဆုံးအွန်လိုင်းဗီဒီယိုပလက်ဖောင်း: UStream, DaCast, Livestream, Kaltura, Ooyala နှင့် Brightcove
16IPTV ကုဒ်နံပါတ် ၁၆ ကို Remote HD ပညာရေး၊ တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်မှုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ အဝေးထိန်းဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်၊ Hosp ည့်ဝတ်ပြုခြင်း IPTV လျှောက်လွှာနှင့်အိုင်ပီတီဗွီထုတ်လွှင့်ခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ :နောက်တစ်ခု "